आजबाट नेपालको नयाँ नक्सा ( सक्दो सेयर गरौ ) – Online Nepal
May 19, 2020 455
४. म घरभित्र साझा रूपमा प्रयोग हुने ठाउँहरू जस्तै भान्सा, शौचालयमा मेरो आवातजावतलाई सीमित गर्नेछु । यी साझा ठाउँहरूमा पर्याप्त भेन्टिलेसन भएको वा झ्याल खुला रहने सुनिश्चित गर्नेछु ।५. म स्वास्थ्य संस्था जान बाहेक अन्य कामको लागि घर बाहिर जाँदिन । म काममा, विद्यालयमा वा सार्वजनिक क्षेत्रहरूमा जाँदिन र सार्वजनिक यातायातको प्रयोग गर्दिन ।
६. म नियमित रूपमा आफ्नो हात साबुन र पानीले मिची मिची २) सेकेन्डसम्म धुनेछु वा हात सफा राख्न अल्कोहलयुक्त हेन्ड सेनिटाइजर प्रयोग गर्नेछु । म हात नधोइ मेरा आँखा, नाक र मुख छुनबाट जोगिनेछु ।७ मैले प्रयोग गर्ने गिलास,कप, खाना खान प्रयोग हुने भाडा, तौलीया रुमाल,ओछ्यान वा अन्य सामानहरू घरका अन्य व्यक्तिहरूसँग साझा प्रयोग गर्दिन । प्रयोग गरेपछि यी सामानहरू म साबुन र पानीले सफासँग धुनेछु ।
Prevनेपालमा थप १८ जनालाई कोरोना पुष्टि, संक्रमितको सख्या ३७५ पुग्यो
Nextतपाई यो लकडाउको बेलामा बिरामि पर्नुभयोभने तुरुन्त शुभासलाई सम्झनु निशुल्क हस्पिटल पुराउँछन् । हेर्नुहोस सम्पर्क नम्वर सहित
डरलाग्दो भयो कोरोना: एकै दिन ४ जनाको नि धन
बागलुङकी कोरोना संक्रमित ६५ वर्षीया वृद्धाले पनि निको भइन्, आइतबार घर फर्किने
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (60524)
लकडाउनकै बीच भर्खरै यस्तो घोषणा, जनताको जीवनका लागि यस्तो निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई (भिडियो सहित्) (28873)